Maazị Nnabụife, onye na-apụta ịzọ ọkwa onye nnọchi anya ụlọ ọgbakọ omebe iwu etiti n'ahọ 2019 site n'ọgbọ nta nkwado Ihiala nke steeti Anambra, kwuru na ndị Igbo kwesiri iso n'otu na-emeri emeri iji wee soro n'ụgbọ na-aga aga n'ebe igwu okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala anyị dị. O mere ka a mara na iji mee ka nrọ ahụ ndị Igbo na-arọ ịbụ onyeisi ala bụ ihe pụtara ihè, na ha kwesiri ịkwadosi Buharị ike ka o wee chịa nke ugboro abụọ, maka na ọ chịchaa ahọ anọ a fọdụụrụ ya, ọ rịtuo, ọchịchị echezie ndị Igbo.
Ọ sị na ọ bụ naanị Buharị nwere ikike iwepu osote ya bụ ọkammụta Osibanjọ. O kwukwara na ọ bụrụ na ndị Igbo akwadoghị ọchịchị Buharị nke ugboro abụọ, Ị mara na onye onye ọzọ ma ọ bụ onye ọhụrụ ga-abata ga-achọkwa ka ọ chịa ahọ asatọ zuru ezu tupuu ọ rịtuo, bụkwazị nke o kwuru na ọ ga-ebì ndị Igbo aka ọjọọ.
Otu ọ dị, maazị Nnabụife kpọkuru ọchịchị APC n'ala anyị n'okpuru ndu onyeisi ala Buharị ma dụọ ya ka ọ kwụghachi ndị maghara ndịda-ọwụwa anyanwụ nkwàdo niile ha na-enye ya na ọchịchị ya. Ọ kpọkuru ọchịchị etiti ka o cheta mpaghara ahụ ma malite ịṅa ntị nyegara ọtụtụ ọrụ dị iche iche na-akpọ okù ka a rụọ ha na mpaghara ahụ, nke gụnyere ọrụ okporo ụzọ awara awara ahụ siri Enugu gaba Ọnịsha, na okporo ụzọ ndị ọzọ nke gọọmenti etiti dị na mpaghara ahụ, akwa mmiri Naịja nke abụọ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ e ji akwalite ọnọdụ obibi ndụ ụmụ mmadụ.
Ọ kọwara na ọ dị njọ nke ukwuu ma ọ bụrụ na gọọmenti etiti emeghị ohe ọbụla chaa chaa na mpaghara ahụ, ma sị na nke ahụ ga-ewetara ha ọnọdụ ọjọọ, ọkachasị ha onwe ha bụ ndị nọ n'otu ndọrọ ndọrọ APC na ndị ji aha otu ahụ apụta ịzọ ọkwa ọchịchị n'ihi na ọ gaghị ekwe ha chụọ nta nkwado na mpaghara ahụ.